BIG T33 uqhagamshelo olukhawulezayo
Isihluzi se-T33 sineempawu zofakelo olulula. Hluza indibaniselwano yasimahla, ixabiso eliphantsi, umoya omhle. Imodeli yokusetyenziswa inokudityaniswa kunye necartridge yecarbon eyenziweyo. Ikhadi lokucoca ulwelo lwe-PP kunye nekhabriji yokuhluza yodongwe, umatshini wamanzi acocekileyo, isicoci samanzi endlu. Umatshini wombhobho wepayipi kumatshini wamandla njl. Isitshixo kumanzi alungileyo yicartridge yokuhluza. Nika isisombululo esisezantsi samanzi okusela kwiimfuno ezahlukeneyo. Ukhuseleko lobugcisa bemodeli kunye namava oShishino lweNgcali ekubumbeni ngenaliti. Icebo lokucoca ulwelo elisetyenzisiweyo kuyilo lwangaphakathi, akukho zisongelo. Iipesenti ezili-100 zokungeniswa kwemveliso eluhlaza zenziwe. Beka isiphelo seCartridge ebomvu ngesando samanzi ngelixa isiphumo sexesha elide kulula ukusonakalisa, ukuvuza kwamanzi ngoMeyi.
T33 iCartridge lokucoca ulwelo
T33 Icebo lokucoca ulwelo lineempawu zofakelo olulula. Hluza indibaniselwano yasimahla, ixabiso eliphantsi, umoya omhle. Imodeli yokusetyenziswa inokudityaniswa kunye nekhabhoni esebenzayoiCartridge yokuhluza. I-PPiCartridge yokuhluza kunye neceramic iCartridge yokuhluza, umatshini wamanzi acocekileyo, isicoci samanzi endlini. Umatshini wombhobho wamandla wombhobho njl njl. Isitshixo samanzi alungileyo yileiCartridge yokuhluza. Nika isisombululo esisezantsi samanzi okusela kwiimfuno ezahlukeneyo. Ukhuseleko lobugcisa bemodeli kunye namava oShishino lweNgcali ekubumbeni ngenaliti. Icebo lokucoca ulwelo elisetyenzisiweyo kuyilo lwangaphakathi, akukho zisongelo. Iipesenti ezili-100 zokungeniswa kwemveliso eluhlaza zenziwe. Beka isiphelo seCartridge ebomvu ngesando samanzi ngelixa isiphumo sexesha elide kulula ukusonakalisa, ukuvuza kwamanzi ngoMeyi.
ICartridge yesihluzi yenzelwe ukunxibelelana nemibhobho kulunge kakhulu ukufakelwa kunye nokutshintshwa. Ingazaliswa ngamajelo eendaba ahlukeneyo anje nge-PP yokusonta Icebo lokucoca ulwelo oluyi-granular, icarbon activated, resin ceramic balls KDF to meet different needs
Akukho binder yongezwa ngqo kwiqokobhe le-tubular. Isetyenziswa ikakhulu kumatshini wokulungisa umatshini we-RO ukuphucula incasa yamanzi kunye nokwenza amanzi abe mnandi.
Ngokweemfuno ezahlukeneyo zomgangatho wamanzi kongeza izinto ezahlukeneyo
Ubukhulu: 2.5 * 12inch
Unxibelelwano: Jaco .plug-in, uqhagamshelo olukhawulezayo
Izinto ngaphakathi: I-PP ibhloko yekhabhoni, icarbon granular .resin
Ileyibhile: uyilo loMthengi
Ubungakanani Ukupakisha: 25 iiPC / baseKapa
Indawo yokuhlala kunye nentengiso
Icebo lokucoca ulwelo lwangaphakathi lenziwe ngeqokobhe lecoconut elisebenza ngokusisiseko. Icebo lokucoca ulwelo ngaphakathi kwikholam yaziwa njengesixhobo sokucoca ulwelo, kuba ihlala isigaba sokugqibela saso nasiphi na isekethe ejwayelekile yokubuyisela umva osmosis.
Iinyanga ezi-4 ukuya kwezi-6 / 20000- 30000 yeelitha zokucoca ubomi (kuxhomekeke kumgangatho wamanzi). Guqula ukuze ugcine incasa emnandi yamanzi akho.
Isusa amasuntswana amakhulu kwaye acocekileyo
Owona msebenzi uphambili wokucoca ulwelo kukususa amasuntswana amakhulu nacocekileyo emanzini okusela, anjengesanti, ubumdaka, intlenga, kunye nomhlwa amasuntswana, iChorine, iiChloramines, iiVumba eziNgcolileyo eziMbi, kunye neeVOC. .
Egqithileyo intambo encinci ye-T33
Okulandelayo: 10 "t33 uqhagamshelo olukhawulezayo
Icebo lokucoca ulwelo emgceni
Icebo lokucoca ulwelo emgceni Nge 1/4 Inch Push neZilinganisi
Kk Sinyibilikise okuVuthelweyo Amacebo okucoca amanzi
Icebo lokucoca ulwelo lokucoca amanzi
Amacebo okucoca amanzi
intambo encinci ye-T33
BIG T33 umsonto
10 "t33 uqhagamshelo olukhawulezayo
Icebo lokucoca ulwelo emgceni, Isihluzi sePp Meltblown Cartridge, iCartridge yokucoca amanzi, Kk Gac Cto Isihluzi seCartridge, Kk Isihluzi seCartridge, Iifilitha zamanzi zeNdlu iphela,